Dhimashada COVID-10 ee Russia bishii Sebtembar ayaa laba jibaartay tirada rasmiga ah ee dowladda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Dhimashada COVID-10 ee Russia bishii Sebtembar ayaa laba jibaartay tirada rasmiga ah ee dowladda
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dhimashada COVID-10 ee Russia bishii Sebtembar ayaa laba jibaartay tirada rasmiga ah ee dowladda.
Dowladda Ruushka ayaa lagu eedeeyay inay hoos u dhigtay saameynta cudurka Covid-19 ee dalka.
Dhimashada COVID-19 ee Russia wadar ahaan waa ku dhawaad ​​450,000 - oo ah kan ugu sarreeya Yurub hadda.
In kasta oo ay jiraan codsiyo ka yimid Putin iyo helitaanka ballaaran ee tallaalka guriga, kaliya 32% Ruushka ayaa si buuxda u tallaalay.
Moscow waxay xirtay adeegyada aan muhiimka ahayn 11 maalmood Khamiista iyadoo waddanku uu la dagaallamayo kororka fayraska jabiyay.
44,265 qof ayaa u dhintay COVID-19 gudaha Russia bishii Sebtembar, sida laga soo xigtay Rosstat (Hay'adda Tirakoobka Federaalka).
Tirada ayaa wali hoos uga dhacday rikoorka billaha ah ee Russia ee in ka badan 50,000 oo dhimasho coronavirus ah bishii Luulyo, laakiin waxay ku dhowdahay labanlaab qiyaasta rasmiga ah ee dowladda Ruushka.
Dawlad rasmi ah ayaa sheegtay in Ruushka uu arkay 24,031 dhimasho bishii Sebtember.
Tirooyin cusub ayaa keenaya tirada dhimashada coronavirus ee Russia ku dhawaad ​​450,000, tirada ugu badan ee Yurub.
Dowladda Ruushka ayaa lagu eedeeyay inay hoos u dhigtay saameynta masiibada COVID-19 ee dalka iyo tirada Rosstat - oo la sii daayay goor dambe oo Jimcihii - ayaa sawirtay sawir aad uga mugdi badan marka loo eego tirooyinka rasmiga ah.
Tirooyinka rasmiga ah ee dawladda Ruushka ayaa kaliya tixgalinaya dhimashada halka fayrasku lagu aasaasay sababta koowaad ee dhimashada ka dib baaritaanka meydka.
Rosstat, si kastaba ha ahaatee, waxay daabacdaa tirooyin hoos yimaada qeexitaan ballaaran oo ku saabsan dhimashada ku xiran fayraska.
Ruushka waa dalka ugu dhibka badan Yurub ee uu haleelay cudurka faafa, iyadoo mas'uuliyiinta ay la halgamayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen dareenka tallaalka ee baahsan.
In kasta oo uu codsiyo ka yimid madaxweynaha Ruushka Putin iyo helitaanka ballaaran ee jabsiyada guriga, kaliya 32% dadka Ruushka ah ayaa si buuxda loo tallaalay.
Moscow xidhay adeegyada aan muhiimka ahayn muddo 11 maalmood ah Khamiista iyadoo waddanku uu la dagaallamayo sare u kaca fayras-ku-soo-kordhinta, oo ay horseeday heerarka hooseeya ee tallaalka.
Ruushka ayaa diiwaangeliyay 1,163 COVID-19 dhimasho shalay.
Putin ayaa amar ku bixiyay in dalka oo dhan la qabto 'toddobaad lacag ah' (si looga fogaado adeegsiga ereyga '' xiritaan '' oo aan caan ahayn) laga bilaabo Sabtida dadaal lagu xakameynayo fiditaanka fayraska.